Umthandazo wokuzila ukutya yonke imihla - ngaphambi kokutya, phambi kwePasika - uEfrayim umthandazo waseSiriya
Okunye Ieholide IPasika
Ukufika kweLente kudinga ukuba abantu babe "ukulungisa" ukuziphatha, okumele kuhlanjululwe iingqondo zabo kwaye bancede bazive belula. Ngoko ke, ngexesha lokuzila akufanele udla ukutya okunzima, kufuneka uzame ukushiya imikhwa emibi. Kodwa nangaphambi kwePasika, kufuneka uphakame ngokomoya, ufunde iZibhalo Ezingcwele kwaye uthandaze imihla ngemihla. Umthandazo ucetyiswa ukuba unike ixesha ekuseni kwaye kusihlwa. Umzekelo, unokuwufunda yonke imihla ngaphambi kokutya. Le nto ingaba ngumthandazo kaEfrayim umSiriya okanye omnye umthandazo. Kubalulekile kuphela ukugcina ubungqina beengcamango, ukugxotha iingcinga ezimbi kuwe. Umthandazo okhethekileyo wokuzila ukutya kuya kukunceda ulungiselele i-Easter ngaphandle kobunzima kwaye udibana neholide enkulu kwiimeko ezintle.
Umthandazo omhle wonk 'imihla yokuzila ukudla
Imihla ngemihla iphikisana, imisebenzi kunye nemicimbi yasekhaya kwiintlobo ezininzi zishiya impendulo yazo kubo bonke abantu abalele. Emva koko, ngamanye amaxesha abafumani amandla kunye nomnqweno wokutyelela icawa okanye kwintsapho ukuba bachithe ixesha lokufunda iZibhalo ezingcwele. Ngako oko, ngexesha lokuphumula baya kuba nako ukubuyisela ukulinganisela kokomoya, ukunxibelelana kunye nezihlobo kunye nezihlobo, ukulibala ngokungafani nokubulela iNkosi ngenxa yempilo yentsapho yakhe. Uncedo kulo luya kunceda umthandazo omhle kwiLente, evezwe ngeenkonzo zecawa okanye ngaphambi kokutya ekhaya.
Imizekelo yemithandazo enhle yosuku ngalunye lweLente
Ukukhetha umthandazo omnandi we-Lenten, ungakhohlwa ukuba kwiintsuku zokuqala zokuzila ukutya okufunekayo. Kwiintsuku ezi-4 zokuqala, kufuneka uhlawule ngqalelo enkulu ekuhlambulukeni kokomoya. Kuya kunceda ukhumbule ngokukhululeka, "gxininisa" iingxaki, ukungafani nokucinga. Ndixelele umphefumlo wam, ungafihli entliziyweni yakho ihlazo lakho. Ngokuba uThixo usekude, athabathe ihlazo entliziyweni yomntu, olila ngenxa yezono zakhe. Yitsho kuwe, kwinto owonayo, vula iNkosi yakho amazwi ezono zakho, kwaye iNkosi uThixo wakho iya kukukhupha, ixolele iipente kunye nokuzondla kakuhle.
Nkosi yam uThixo! Unonophelo olunjani kunye nokwanthukela ebomini bam, kunjani ukwesaba kwakho, kunye nendlela intliziyo yam ibe yinto yesiko ngayo. Ndaduka ngeentloni ngelizwe lakho, nangenxa yokukholiswa kwehlabathi, ndilindele ngentsuku yam, ndaguqa phantsi, ndithuthumela phambi kweenkosana nabantwana babantu ngenxa yezinto zehlabathi, ihlabathi liyabathanda. Kodwa indlela ubukhoboka bam eendleleni zam, indlela endiyenza ngayo intliziyo yam phantsi kwelanga lusuku olutsha!
Imithandazo yemihla ngemihla ngokukhawuleza okukhulu kwiintlanga
Abaninzi banamhlanje bayazibuza ngomthandazo onokufunda ngokuzila ukutya. Kukhona imithandazo eminingi yeLenten efanelekileyo yokunqula ngeentsuku zeveki, kunye nokunqula ngoMgqibelo nangeCawa. Phakathi kwezikhetho ezinikwe apha ngezantsi, unokufumana imithandazo elula kunye emnandi ngosuku ngalunye lokuzila ukutya. Thixo wam, Thixo wam! Ndenzele inceba yakho kum, undifundise ukuba ndikuthande ngaphezu kobomi bakho, kuba amehlo enkolo akayi kubona le hlabathi, oye wamxelela intliziyo yam waza wambamba ubomi bam. Ndiphe, Nkosi, amandla okuthanda ubomi bam, ungubani, uThixo wam, kwaye indlela ephihlileyo neyona ndlela ihamba ngayo phambi kwam. Ngokuba iindlela zakho ziyatshatyalaliswa, Thixo wam entliziyweni yam, ngokuba akukho uxolo kubo; Intliziyo yam ayifumani ukuqinisekiswa kubo, ngokuba idelele ukholo lwayo. Ngokuba ukwesaba kum uvavanyo lomlilo, kwaye ndingowesinye isihambi kum. Ixesha lam liya kuphelelwa nini na, ndiza kumela ntoni phambi kobulungisa bakho?
Utshaba lwam luyithathile imihla yam, Amandla am aphelile phambi kwakhe. Ndiyi kubuya, Nkosi, ngokuyika kwam, Ngokuba umphefumlo wam uyazi iingcamango zam. Ke kaloku, ndive, Nkosi yam uThixo! Vula iindlebe zakho ebuthakathakeni bam uze uphakamise intliziyo yam ukuba ungamkeli ukwesaba kwakhe, Ndifundise intliziyo yam ukuba ithande inyaniso yakho, Ndibeke imihla yam endleleni yakho yobulungisa. Nika ukuzinyameka kwam ukuzondla nokuhlwayela umphefumlo wam kum.
Yimiphi imithandazo phambi kwePaster onokuyifunda ngokuzila ukutya?
Ukukhetha imithandazo kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ngoncedo lwabo umntu makangamathele kwisithuba kungekhona kuphela ngokomzimba, kodwa nangokomoya. Emva kwakho konke, phambi kwePasika kuyimfuneko ukuphepha ekusebenziseni ukutya kwesilwanyana esinzima, nakwiingcinga ezimbi, imithwalo yokuziphatha. Nangona umthandazo omfutshane ekuzila ukutya ngaphambi kwePasika kuya kunceda uzive ukhululekile kwaye uzifumanise kwiintsilelo zehlabathi, uphephe intlungu, iingxaki.
Imithandazo yokuzila ukutya ngaphambi kwePasika kubafundi
Phakathi kwemithandazo yaseLenten ecetywayo, ukubeka abantu baya kuba nako ukufumana amagama aya kubanceda bazilawule kwaye bahambisane nemimiselo ebekiwe. Unokwenza imithandazo kungekuphela kwinkonzo zonqulo okanye ngaphambi kokutya, kodwa nangona kukho iingcinga ezimbi nezono. Umthandazo omfutshane uza kukuvumela ukuba uzihlambulule ngokomoya kwaye udibanise nomoya oncomekayo. Thixo wam, Thixo wam! Nika intliziyo yam ukungabi nolwazi lwentliziyo kunye nokuphakamisa iliso lam phezu kobugwenxa behlabathi, ukususela ngoku, bangela ubomi bam ukuba bangabakholisa baze bandenzele inceba abo banditshutshisayo. Ngokuba uvuyo lwenu luyaziwa, uThixo wam, nomphefumlo othe ngqo uya kuwubamba, ukuphuma kwayo kubuso bakho buya kubakho kwaye akukho nto iyancenga ngayo. Nkosi, uYesu Kristu, Thixo wam, lungisa ngokuqinisekileyo iindlela zam emhlabeni.
Umthandazo okhethekileyo kaEfrayim umSiriya wokuLent
Umthandazo weMonk Yefim Sirin ubhekisela kwiindawo eziqhelekileyo ezibizwa ngexesha eliphezulu kwiLente Elikhulu. Umthandazo omfutshane uquka ukuguquka kunye nesicelo sokunika umntu othethayo, ngokunyanzela ukumelana nezono, ukuba ahlambuluke. Awuvumeli nje ukukrazula izilingo, kodwa nokugwema ezo mpawu ezinjengokungaziphathi nokuphelelwa yithemba. Umthandazo kaEfrayim umSiriya uqukwa kwiLente nasezinkonzweni zecawa. Ngenxa yokubhala itekisi encinci kunye nesityebi, kulula ukukhumbula. Kodwa ngesandi somthandazo, kubalulekile ukuqwalasela iimpawu kunye nexesha lokubiza kwayo. Umzekelo, ngoMgqibelo nangeCawa yinto yesiko ukuthetha imithandazo yaseLenten.
Umthandazo kaEfrayim umSiriya wokufunda ngexesha leLente
Emva kokufunda umthandazo kaYefim Sirin, umntu makayinakekele ngokuchanekileyo ukubiza kwayo. Ngokuqhelekileyo iphinda iphindwe kabini (ngokwemiqathango ichazwe ngezantsi) emva kwenkonzo. Nkosi noMfundisi wesisu sam, Musa ukunginika umoya wokungaziphathi kakuhle, ukuphelelwa amandla, ukulawula ukukhwela kunye nentetho engathembekiyo. Umoya wobunyulu, ukuthobeka, umonde nothando ndiphe, umkhonzi wakho. Yena, Nkosi, uKumkani! Ndiphe ukuba ndibone izono zam, uze ungamgwebi umzalwana wam uYako uzukise ngonaphakade naphakade. Amen. (Ekupheleni kwexesha leshumi elinesi-12, funda "Ndihlambulule uThixo, umoni", ehamba kunye neengaphetha, uphinde uphendule umthandazo kaEfim Sirin uze uqedele ukufunda kunye nomnsalo omnye womhlaba.)
Nguwuphi umthandazo onokufundwa kwiposi emva kokuhlwa nakusihlwa?
Ngexesha leLente Elikhulu liqhelekileyo ukuya kwiinkonzo zikaThixo. Ngoko ke, ngaphambi kokuya ecaweni, kuyacetyiswa ukuba imithandazo eyenziwa rhoqo iyenziwa. Bangaphindwa ekhaya. Ngexesha elifanayo, kucetyiswa ukuba unike ixesha lokufunda ngokubhaliweyo kweZibhalo ezingcwele, kunye nokuthandaza okanye ukufunda imithandazo kunye nosapho. Oku kuya kuvumela izihlobo ukuba zidibanise kwaye zikhohlwe nayiphi na ukungavumelani.
Imithandazo yasekuseni yeLente
Ngentsasa, ungazifunda imithandazo emfutshane kwaye kulula, ukuvumela ukuba ubeke imvakalelo emihle yonke imini. Kwimimiselo engentla, unokufumana iincwadi ezilungileyo ezikunceda ukulibala ngokungafani. Ndiyakholwa, Nkosi, kodwa ubeka ukholo lwam. Ndiyathemba, Nkosi, kodwa uya kuqinisa ithemba lam. Ndiyakuthanda, Yehova, kodwa uhlambulule uthando lwam, umkhonze. Ndilila, Yehova, kodwa wena, wandise ukuguquka kwam. Ndiyabulela, Nkosi, wena, uMdali wam, Ndibubula ngenxa yakho, ndikubiza. Undikhokele ngobulumko bakho, ukhusele kwaye uqinise. Ndiyincoma kuwe, Thixo wam, iingcamango zam, ukuba ziphume kuwe. Imisebenzi yam iya kuba ngegama lakho, kwaye iminqweno yam iya kuba yintando yakho. Khanyisa ingqondo yam, qinisa intando, hlambulule umzimba, ngcwalise umphefumlo. Ngamana ndibona izigwenxa zam, kwaye ungabi nantoni yokuzikhukhumeza, ndincedise ukunqoba isilingo. Ndikudumisa zonke iintsuku zobomi ondinike zona. Amen.
Yiza, masinqule i-Tsarevi wethu uThixo. Yiza, unqule, uze kuKristu, uNkosana kaThixo wethu. Yiza, siya kunqula size siwele kuKrestu uqobo, ukuya e-Tsarevi kunye noThixo wethu. Woza, simnqule uKumkani, wethu uThixo. Yiza, unqule uze uphonswe emhlabeni ngaphambi koKumkani uKumkani, uThixo wethu. Woza, siqubude size siqubude emhlabeni phambi koKristu ngokwakhe, uKumkani noThixo wethu.
Imizekelo yemithandazo yokuhlwaya yokufunda ngexesha lokuzila
Ngobusuku emva komsebenzi obenzileyo abanokuya kwiingcamango ezingekhoyo okanye ukubonakaliswa kwesono. Imithandazo elandelayo ye-Lenten iya kukunceda ukuba uzilahlekise: Nkosi, uYesu Kristu, uNyana kaThixo, imithandazo ngenxa yoMama wakho Omsulwa kunye nabo bonke abangcwele, sincede inceba. Amen.
INkosi uYesu Kristu, uNyana kaThixo, ngokusebenzisa imithandazo kaMama wakho Ococekileyo kunye nabo bonke abangcwele, nenceba kuthi (sibonise inceba kuthi). Amen.
Umthandazo weNkosi uBawo wethu, Ngubani osezulwini! Igama lakho liyingcwele, Intando yakho mayenzeke, njengasezulwini nasemhlabeni. Siphe lona namhlanje isonka sethu sesimini, size usixolele amatyala ethu, njengoko sixolela abo batyala. Usikhokele kwisilingo, kodwa usihlangule ebubini. Ububukumkani namandla kunye nozuko, uYise noNyana kunye noMoya oyiNgcwele, ngoku naphakade naphakade naphakade. Amen.
Umthandazo wemihla ngemihla ngaphambi kokutya ukutya ngaphambi kwePasika
Kubalulekile ukuthandaza ngokuzila ukutya ngaphambi kokutya. Baya kunceda bambulele iNkosi ngenxa yokutya ayifumene kwaye kwimeko enokuqala ukuyifumana. Kunconywa ukuba uthethe imithandazo kunye nentsapho yonke: oku kuya kunceda ukuqhagamshelana nezihlobo kunye nabahlobo.
Umthandazo wemihla ngemihla unokuzila ukudla ngaphambi kokutya?
Kubalulekile ukuthetha imithandazo emfutshane imfutshane ngexesha lokuzila ukutya imihla ngemihla. Ngaphambi kokutya, nangemini yeveki, nangempelaveki, unokufunda umthandazo ocetywayo: Ootata, abahlaziyi kunye nabafazi abakwaziyo, Ukubhabha entliziyweni kwindawo engabikho, Ukuyomeleza phakathi kweemvula nemfazwe, Ukudibanisa imithandazo kaThixo emininzi; Kodwa akukho nanye kubo ondichaphazelayo, Njengomnye umbingeleli uphinda ngokuphindaphinda Ngeentsuku zokulila kweLente Elikhulu; Ngokuqhelekileyo uya kufika kum ngomlomo kwaye umntu owileyo uqiniswa ngamandla angaziwayo: Nkosi yam imihla! umoya wokungaqondi kakuhle, uLubovinachia, inyoka yale nto efihlakeleyo, Intetho engathethiyo, ungawuvumeli umphefumlo wam. Kodwa makhe ndibone mna, Thixo, isono, Umntakwethu kum, akayi kwamkela ukugwetywa, Umoya wokuthobeka, umonde, Uthando nobumsulwa entliziyweni yam. Imithandazo yokufunda ngexesha leLent iyakunceda abantu bahlambulule ngokomoya baze bahambelane nesicwangciso sokuzila ukutya kwada kwada kwa-Easter. Unokufunda imithandazo ngaphambi kokutya, kwaye kusasa nangokuhlwa. Ingaba ngumthandazo okhethekileyo wemihla ngemihla okanye umthandazo omhle kwisithuba seSt. Efrayim waseSiriya. Phakathi kwemizekelo ecingwayo, unokukhetha okulula ukukhumbula imithandazo yosuku ngalunye lokuzila ukudla. Banokufunda lula abantu abadala kunye nabaselula.
Iimpawu ezihle ngePasika 2017
Ncoma kakhulu ngePasika kwivesi kunye neprose
Siyidala ndawonye: indlela yokudweba i-Easter kwaye yintoni enye ongayifumana iPasika
Ukuthokoza kakhulu: senza amakhadi ngePasika ngezandla zethu
Imithandazo kunye nezicwangciso zePasika
Umdwebo omuhle wePasika kubafundi - iiklasi zeeklasi kwizigaba
Amagama abenzi bokumema uPitti Uomo
Ukuba umntu owayengumthandi wayephethe iphupha
Iibhatateshi ngendlela efanayo kwivenkile ye-microwave
Isonka se Banana kunye nesinamoni
Ukungondleki komntu okhulile
Ukuvulwa kwexesha lebusika kwi-rink
Ukwabelana ngesondo ngohlobo lwegazi
Uthando lokwenene nothando